Alahady 06 Jona 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady voalohany amin’ny volana
Alahady nandraisana ny Fanasan’ny Tompo
"Anorenana ny maha kristiana ny finoana”
Izany indray ny Havana no teny fitaizam-panahy ho antsika mandritra izao volana jona izao .
Ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 08 ora maraina no nanaovana ny tatitra.
Ramilison Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto an-toerana, no nitondra ny hafatry ny Tompo.
Razafindrabe Mamy Bam, Biraom-piangonana, no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny.
Razanajatovo Ravakiniony, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Asa vavolombelona kosa no nanao ny vakiteny.
Ny Genesisy toko faha 7, no Tenin’Andriamanitra nakana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany kosa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
ovakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 95:1-7a: “Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah. Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin’ny tany. Ary Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa Izy no nanao azy. Ary ny tany maina dia noforonin’ny tanany. Avia ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika. Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah. Mpanao antsika. Fa Izy no Andriamanintsika. Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika”.
Natao ny hira FFPM 7:1-2-3 “Misaora an’Andriamanitra”.
Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana, noho ny fitarihan’Andriamanitra. Faly sy ravo, ary misaotra sy midera ny anaran’Andriamanitra be fitiavana sy be voninahitra satria na nahomby na nahery na koa solafaka dia teo foana Andriamanitra. Misaotra an’Andriamanitra ihany koa noho ny famindrampony sy ny fisokafan’ny trano fiangonana. Misaotra amin’ireo zava-baovao atolotr’Andriamanitra.
Hira FFPM 465: “Ry Jeso o, ry Jeso”.
Noredonina ny hira FFPM 403: “Ry Jeso Tompo tsara o”, taorian’ny vavaka fifonana sy ny vavaka mangina izay narahan’ny feon-javamaneno fohy.
Taorian’ny Teny famelan-keloka dia niarahana nohiraina ny FFPM 517 “Ny alina ho lasa”, and.faha 3. Notononin’ny Fiangonana niaraka ny fanekem-pinoana Apostolika narahana feon-javamaneno fohy.
Zoky Jocelyn RABEARINORO , Mpampianatra sekoly alahady , no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Ny Salamo 119:9 “Inona no hiarovan’ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao”, no nanatsoahana ny lesona.
Eo amin’ny fahatanorana no tena hisian’ny fakampanahy, mety handoto ny lalana alehantsika. Mila fitandremana isika.
Tantaran’i Jesoa Kristy izay nalain’ny devoly fanahy no nentina nangalana ny hafatra ao amin’ny boky Matio 4:11.
Mila manana ny Tenin’Andriamanitra isika hoentina miady amin’ny satana isaky ny misy zavatra miseho, satria hovoaloton’i satana ny lalana alehantsika. Nandritra izay fotoana tsy nianarana izay ihany koa dia nisy ny hakamoana teo amintsika mpianatra.
Fampiharana: ankehitriny, ny vaksiny no malaza indrindra. Ao ireo manaiky ao ihany koa ireo tsy manaiky. Misy ny fizarazaran-kevitra maro. Ho fanamafisantsika izany dia hiarahana mamaky ny I Tes.5:21 “Fantaro ny zavatra rehetra, Hazony mafy izay tsara”.
Taorian’ny hafatra sy ny vavaka dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira FFPM 786 “Ny Teninao Jehovah”, and. faha 4.
Novakina ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 3:17b ho fanombohana ny filazan-draharaha.Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany.
Oniversite FJKM Ravelojaona: miverena ny fianarana ny alatsinainy 07 jona 2021
Miverina misokatra ny trano fiangonana. Hamafisina hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Satria mbola voafetra ny isan’ny olona afaka miara-manatrika ny fanompoam-pivavahana ny alahady maraina, dia natao mitovy endrika amin’izany ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, ka haroso ho amin’ny 5 ny fanombohan’ny fotoana: Alahady @ 08 ora maraina & Zoma @ 05 ora hariva
Fiarahabana sy hafatra ireo nanana tsingerintaona teraka vola martsa, aprily, mey, izay hita ao amin’ny Deo. 28:8: “Handidy ny fitahiany ho aminao Jehovah amin’ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon’ny tananao, ka hitahy anao Izy any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao anao”.
Nisy ny vavaka ho fangataham-pitahiana ho an’ireo nanana tsingerintaona.
Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana. Nohiraina ny hira FFPM 625 “Mpamonjy soa malala o”, and. faha 5.
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 576:2:”Ry Sakaizan’ny mpanota”, and. faha 2.
Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana. Nohiraina ny hira FFPM 625 “Mpamonjy soa malala o”, and. faha 5. Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 576:2:”Ry Sakaizan’ny mpanota”, and. faha 2.
Hira FFPM 183:1-3 no nohiraina mialoha ny vakiteny Soratra masina.
Araka ny Perikopa androany, nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ny Mpanolotsainam-piangonana Razafindrabe Mamy Bam. Namaky ny Soratra Masina, Ravakiniony Razanajatovo, Diakona, ka ny Genesisy 7:1-5, Marka 11:20-24, Galatiana 2:11-21 izany.
Natao ny hira FFPM 748 “Havaozy, Tompo o!” and. faha 3
Mianatra sy mifampahery
Ny andinin-tSoratra Masina nanatsoahana ny hafatra dia tao amin’ny Genesisy toko faha 7, izay manambara ny tantaran’i Noa sy Eroka. Olona roa niara-nandeha tamin’Andriamanitra ary olona roa marina teo anatrehan’Andriamanitra sy nanana ny finoany ihany koa.
Araka izany finoana nananany izany dia mitaky ny fanekena an’Andriamanitra.
Izany fanekena izany anefa dia mila:
Manaiky ny Tenin’Andriamanitra, manaja tanteraka amin’ny fo ary manaraka ny toromarika sy ny torohevitra rehetra. Ny finoana lehibe miaraka amin’Andriamanitra no hanorenana ny maha kristiana. Izany finoana izany koa dia hiainana ao anatin’ny vavaka. Notsoahana tao anatin’ny mpianatry ny Tompo ny teny hoe Kristiana sy ny nanomezana voalohany ny anarana hoe Kristiana.
Manoa ny Tenin’Andriamanitra: izany hoe tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Matanjaka ny olona tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Matoky izay Teny lazain’Andriamanitra na mandalo zava-tsarotra aza. Ny olona mino sy manoa an’Andriamanitra dia mampiseho fa matanjaka eo amin’ny fiarahamonina.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena.
Nataon’ny Mpitandrina miana-draharaha Ramilison Diamondra ny vavaka fangatahana izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niarahana tamin’ny Fiangonana.
Taorian’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia notononina ny tondrozotra 2020 ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.
Nandray ny Soratra : RAOLIARIZAKA Bakoly
Nitendry Orga : RAJAOFETRA John Philippe